Ny fahasoavana sy ny famindrampo : Mampahery
"Eny tokoa, fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon 'i Jehovah andro lava aho." - Sal. 23:6.
I Kristy dia tsy mba nanome toky antsika fa ho mora ny fanatrarana ny fahatanterahana eo amin'ny toetra. Tolona sy ady ary dia atao isan'andro isan'andro izany. Amin'ny fahoriana be no hidirantsika ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy maintsy miaritra ny fijaliana niaretan'i Kristy isika raha te hiaina miaraka Aminy any amin'ny voninahiny (...) Efa nahazo ny fandresena ho antsika Izy. Ho feno tahotra sy ho kanosa ve isika noho ireo fitsapana izay atrehintsika eo am-pirosoana bebe kokoa? (...)
Tokony hidera an'Andriamanitra fa tsy ho feno fitarainana isika, rehefa mihevitra lalindalina kokoa ny amin'ny famindrampo sy ny fitiavana ary ny hatsaram-panahy asehony. Tokony hiresaka ny amin'ny fiahiana nataon'ny Tompo tamintsika isika, ny amin'ny fangoraham-po ombam-pitiavana nasehon'ilay Mpiandry Tsara. Tsy hiloaka avy ao am-po ny fimonomononana sy ny fitarainana. Ny fiderana, tahaka ny rano mangarahara mikoriana, dia hipololotra avy amin'ireo tena mino marina an'Andriamanitra. Hiteny manao hoe izy ireo: "Ny fahasoavana sy ny famindrampo no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho." (...)
Nahoana no tsy hanandra-peo hihira tononkiram-panahy mandritra ny andron'ny fivahinianantsika isika? (...) Mila mianatra ny Tenin'Andriamanitra, mandini-tena ary mivavaka isika. Dia hanana masom-panahy mahatazana ny kianja anatiny ao amin'ny tempoly ao an-danitra isika. Tokony hiray feo amin'ny hira fankalazana izay ventesin'ny antoko mpihiran'ny lanitra manodidina ny seza fiandrianana isika. Rehefa hasandratra sy hamirapiratra i Ziona, dia ho hita taratra indrindra ny fahazavany, ary ho re manerana ny fiangonan'ny olona marina ireo hiran'ny fiderana sy fankalazana. Tsy ho tazan'ny maso ireo fahadisoam-panantenana madinidinika sy ireo zava-tsarotra manoloana.
Ny Tompo no famonjena ho antsika (...) Tsy ho very maina ny fitokian'ny olona amin'Andriamanitra. Tsy mandiso fanantenana velively ireo izay miankina Aminy Izy. Raha manao izay asa asain'ny Tompo hataontsika isika, ka manaraka ny dian-tongotr'i Jesôsy , dia ho tonga harpa masina ny fontsika, ka ny tadiny tsirairay dia hanolotra fiderana sy fankasitrahana ho an'llay nirahin'Andriamanitra mba hanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. - RH, 5 May 1910.